संक्रमितको दैनिक अपडेटबाट भ्रममा नपरौँ, यो हो खास कुरो - Aarthiknews
हामी हरेक दिन अपराह्न ४ बजेपछि उत्सुक बन्छौँ - आज नेपालमा कति जनामा कोरोना सङ्क्रमण पाइयो ? कति जनाको मृत्यु भयो ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले सुची पढ्छन्। मिडियाले समाचार बनाउँछन्। तर, विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्-यो पूर्ण रूपमा सत्य छैन। बरु यो भ्रामक छ। यसले रोगको पुनरुत्थान भएको देखाउँछ न की कोभिड-१९ का बिरामीको।
सेन्टर फर रिसर्च अन ग्लोबलाइजेसनका अनुसन्धानकर्ता तथा वरिष्ठ फिजिसियन एवं प्रख्यात जनस्वास्थविद डा. पास्कल साक्रेका अनुसार पीसीआर परीक्षण सार्स-कोभ-२ पत्ता लगाउने मात्र एक माध्यम मात्र हो र त्यो परीक्षण विश्वसनीय छैन । केही व्यक्तिमा कुनै लक्षण नै हुँदैन वा हल्का लक्षण मात्र हुन्छ। कसैमा परीक्षण नतिजा सकारात्मक आउनुको अर्थ सो ब्याक्तिको स्वास्थ्यबारे थप व्याख्याको जरुरी छ। तर, निजलाई पीसीआर नतिजा कै आधारमा रोगीको रूपमा चित्रण गर्नु चाहिँ गलत हो । त्यसैले धेरै डाक्टरहरू, विषाणुविज्ञहरूले भन्ने गरेका छन् - आधिकारिक निकायद्वारा छरिएको यो भ्रम खतरनाक छ ।
प्राविधिक चिकित्सा र प्रविधिको सर्वशक्तिमान् एक प्रकारले अन्धविश्वासको प्रतीक हो जुन भ्रम विश्वव्यापी रूपमा परीक्षण किट उत्पादन गर्ने उद्योगद्वारा बनाइएको छ, केही चिकित्सकहरू र मिडियाद्वारा त्यसको प्रचार भइरहेको छ । हामीले नेपालमा नै पनि देख्यौँ कसरी आफूले गरेको आर्थिक अनियमितता लुकाउन र्यापिड परीक्षण गरियो जुन आवश्यक नै थिएन। अनि त्यो किट सकिएपछि कसरी र्यापिड टेष्ट माथि प्रतिबन्ध लगाइयो जुनबेला त्यो आवश्यक थियो।
खोपको मामलामा एक प्रकारको ओभर सिम्प्लिफिकेसन (अति सामान्यीकरण) छ जुन जनमतलाई हेरफेर गर्नका लागि गर्ने गरिन्छ । यसको एक उदाहरण मानव प्रतिरोधक क्षमतालाई एन्टिबडीहरूमा सम्स्लेषित गरिएको घटनालाई मान्न सकिन्छ। मानिसहरूलाई विश्वास दिलाउनको लागि आरटी-पीसीआर परीक्षण सकारात्मक देखिनु कोभिड-१९ रोग लाग्नु हो भन्ने गरिएको छ।
यो हो पीसीआरको खास कुरो
आरटी-पीसीआर नतिजा सकारात्मक आउनुको मतलब कोभिड- १९ हुनु होइन। यसलाई कोरोना सङ्क्रमणको पर्यायवाची मान्नु गलत हो । आज अधिकारीहरूले अधिक व्यक्तिहरूको परीक्षण गरेका छन् त्यसैले यहाँ अधिक सकारात्मक नतिजा देखिएको हो। यसको मतलब यो होइन कि कोभिड-१९ ह्वात्तै बढ्यो। वा यसको नयाँ तरङ्ग महामारीको रूपमा बढिरहेको छ । धेरै व्यक्तिहरूको परीक्षण भइरहेको छ कुरा यती मात्र हो।
के यी परीक्षणहरू भरपर्दो छन्? गलत समाचार र गलत सकारात्मक नतिजाबाट सावधान रहनुहोस् । भाइरस परीक्षणमा पीसीआर परीक्षणको यो कमजोरी बर्षौंदेखी सबैलाई थाहा छ । सन् १९९३ मा रसायन शास्त्रको लागी नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्षम क्यारी मुलिसलाई पीसीआर प्रविधिको आविष्कार गरेबापत नै सो पुरस्कार दिइएको थियो। उनका अनुसार यो परीक्षण गुणात्मक नतिजाको लागि हो। यसले मात्रात्मक/परिमाणात्मक प्रश्नको जवाफ दिँदैन। किनकि यो परीक्षणहरूले भाइरल कणहरू, आनुवंशिक अनुक्रमहरू पत्ता लगाउँछ, सम्पूर्ण भाइरसबारे यसले जानकारी दिने होइन।
भाइरस लोड यकिन गर्नको लागी असङ्ख्य जटिल चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्रममा धेरै पटक ती कामहरू हुन्छन् जुन त्रुटिपूर्ण हुने व्यापक सम्भावना रहन्छ।
पीसीआर रिपोर्ट सकारात्मक हुनु नै कोभिड हुनु होइन भन्न किन पनि सकिन्छ भने पीसीआर विशेषज्ञहरूले यो स्पष्ट पारेका छन् कि परीक्षणलाई जहिले पनि बिरामीको क्लिनिकल रेकर्डसँग तुलना गर्नुपर्दछ। बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थासँग यसको विश्वसनीयता पुष्टि गर्नु आवश्यक हुन्छ।
रगतमा प्रोटिनको निर्धारण गर्ने भनेको सेरालोजीले हो। कोभिड-१९ मा एन्टिबडीहरू (इम्युनोग्लोबुलिन)कोरोनाभाइरसको लागि खोजिन्छ। प्रत्येक परीक्षण विशेष प्रकारको एन्टिबडी हेर्नका लागि हुन्छ । यसले भाइरसको उपस्थिति पत्ता लगाउन कोसिस गर्छ।
सेरोलोजिकल परीक्षणले व्यक्तिले भाइरस विरुद ह्युमरल (एन्टिबडी-आधारित) प्रतिरक्षा विकसित गरेको छ कि भनेर हेर्छ। सकारात्मक सेरालोजीले निश्चित गर्दछ कि व्यक्ति कुनै बेला भाइरससँग सम्पर्कमा थियो। तर यो पनि पूर्ण रूपमा सत्य होइन। वास्तविकता न त यति सरल छ र न यत्ति स्पष्ट!
धेरै डाक्टरहरू आफैँलाई थाहा छैन कसरी मानव एन्टिवाइरल प्रतिरक्षाले काम गर्दछ। क्रस-प्रतिरक्षा, गैर-विशिष्ट जन्म प्रतिरोधक क्षमता र सेल विशिष्ट प्रतिरक्षा सेरालोजीद्वारा मापन हुँदैन। यद्यपि ती आवश्यक छन्।
इम्यूनोपाथोलजीका अनुसार बिरामीको अवस्थाले शरीरको प्रतिक्रियालाई निर्धारण गर्दछ। जीवविज्ञानको क्षेत्रमा आश्चर्यजनक प्रगतिको यस युगमा यो बिर्सन हुँदैन कि प्रणालीगत स्तरमा इम्युनोलोजीको बारेमा हाम्रो धारणा अझै पनि भ्रूण अवस्थामा छ। आधुनिक इम्युनोलजीसँग असङ्ख्य जटिल शारीरिक घटनाहरूको मात्र सीमित समझ छ ।
त्यसैले कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा पनि यसलाई विशिष्ट एन्टिबडीहरूमा मात्र संक्षेप गर्नु भनेको खतरनाक हो। यो एक नाटकीय सरलीकरण हो जसले सबै तर्कलाई विकृत गर्दछ। अनि भविष्यमा खोप नीति लगाएर अन्धो बनाइन्छ।
हामीमध्ये धेरैले बाल्यकालदेखि नै यी कोरोनाभाइरसको राम्रो प्रतिरोध क्षमता विकास गरेका छौँ। यो त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमता हो जसले कुनै पनि खोपको विकास हुनु भन्दा पहिले धेरै जसो कोरोना भाइरसबाट बचाएको हुन सक्छ।
सामान्य रुघाखोकी लगाउने कोरोनाभाइरस प्रतिरोधात्मक क्षमता पहिले नै देखिसकिएको छ। यो सेल आधारित प्रतिरोधात्मक क्षमता हो, एन्टिबडीमा आधारित होइन।
नयाँ प्रतिरोधक क्षमता विशिष्ट छैन। अनि एन्टिबाडीको विकास उपचार वा सुरक्षा कवच होइन। प्रतिरोधक क्षमता सङ्क्रमणको पहिलो जवाफ हो यसले सङ्क्रामक एजेन्टलाई नष्ट गर्दछ।
यो एक महत्त्वपूर्ण एन्टि-भाइरल बाधा हो जुन आईजीजी सेरालोजीहरूले पत्ता लगाउँदैन। यो जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता विशिष्ट प्रतिरक्षाको आवश्यकता बिना नै हामीलाई भाइरसबाट जोगाउन सक्षम छ, यदि हामी स्वस्थ छौँ भने।
सम्भवतः यही कुराले जवान र वयस्क स्वस्थ व्यक्तिहरूमा कोभिड-१९ रोगको कम सङ्क्रमण देखिनुमा योगदान पुर्‍याएको छ। यो जन्मजात प्रतिरक्षाले भाइरस धेरै चाँडै नष्ट गर्दछ। सङ्क्रमणलाई व्यवस्थित गर्न एन्टिबडीहरू विकास गर्न आवश्यक पर्दैन, तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन कम्तीमा पनि परीक्षण आवश्यक छैन।
एउटा स्विडेनी अध्ययनले देखाए अनुसार कोभिड-१९ बाट प्रभावित व्यक्तिहरूले योग्य एन्टिबडीहरूको अभावमा सेलुलर सेल प्रतिरक्षा प्रणाली विकास गरे । यसैले यस्तो धेरै सम्भावना छ कि यो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया नयाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्ध रक्षा गर्न पर्याप्त छ। जे होस्, यी मध्ये कुनै पनि हालको सेरोलोजिकल परीक्षणहरूले प्रदर्शन गर्दैन।
बरु कोभिड-१९ ले हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्थाको सूचकको रूपमा कार्य गर्दछ। स्वास्थ्य स्थिति हाम्रो जीवन स्तर वा हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको गुणवत्तासँग मात्र सम्बन्धित छैन। राम्रो स्वास्थ्य हाम्रो आहारको गुणस्तर, हाम्रो शारीरिक गतिविधि र सबै भन्दा माथि, हाम्रो दिमागको अवस्थासँग जोडिएको छ।
राम्रो मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्व हाम्रो जीवनको गुणस्तर र रोग बिमारको सामना गर्ने हाम्रो क्षमतामा सर्वोपरि छ। डर, भय, सामाजिक दूरी, लगातार मास्क लगाउनु जस्ता कुराले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य बिगार्न योगदान गर्दछ। मनोविज्ञान र एन्डोक्राइन हर्मोनहरूको स्नायु र प्रतिरक्षा प्रणालीबिचको सम्बन्ध प्रमाणित भएको छ।
अस्वास्थ्यकर व्यक्तिहरूमा सामान्य सुरक्षा प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा एक अपर्याप्त हुन्छ। यही कारणले गर्दा बिरामी व्यक्तिहरू रोगको सबैभन्दा गम्भीर प्रकारबाट ग्रस्त हुन्छन्। स्वस्थ युवा मानिसहरू र वयस्कहरू सुरक्षित छन् किनभने तिनीहरूको प्रतिरक्षा क्षमता स्वस्थ छ। यसले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई अचम्मित मात्र गर्दैन, यसले हाम्रो विश्लेषणात्मक र सोच्ने क्षमताहरू पनि स्थिर गर्दछ।
निष्कर्षमा, मानव प्रविधिहरू सीमित छन्। कहिलेकाहीँ त्रुटिका स्रोतहरू बन्छन्। चिकित्सा विज्ञानमा शुद्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पिसीआर परीक्षण प्रविधिले गलत सुचना दिन सक्छ। एक सकारात्मक पिसीआर परीक्षण कोभिड-१९ रोगको पर्यायवाची होइन।
मुख्य कुरा के हो भने कोरोनाका लक्षणहरू रुघाखोकी-ज्वरो-श्वासप्रश्वासको कठिनाइ-स्वाद वा गन्ध थाहा नपाउनु आदी देखिएमा तपाईँलाई थप हेरचाहको आवश्यकता छ। यदि तपाईँ बाहिर जानु छ भने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुस् र हात धुनुहोस्। धेरै जनामा कुनै लक्षण हुँदैन, तिनीहरूले आफ्नो स्वस्थमा रहेको जन्मजात र क्रस प्रतिरक्षालाई विश्वास गर्नुपर्दछ।
सरकारी मातहतका सबै अस्पताल आर्थिक संकटमा